पोखरा। फेवा तालको बाँध मर्मत गरिएको छ। पानीको चुहावट बढेपछि फेवातालको पानी रोक्ने मुख्य ड्याम चार दशकपछि मर्मतसम्भार गर्न थालिएको हो। ड्याम मर्मतका लागि तालको दुई मिटर पानी घटाइएको छ। यसअघि सामान्य रूपमा ड्याम मर्मत गरिए पनि बृहत् मर्मत भएको थिएन।
ड्याम मर्मतकका लागि एक महिना लाग्ने भएकाले तालको पानी एक महिनासम्म घटिरहने जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कास्कीका प्रमुख इन्जिनियर किरण आचार्यले जानकारी दिए। ड्यामको मुनिबाट पानी रसाएपछि जोखिमका सम्भावनलाई मध्यनजर गर्दै मर्मत थालिएको आचार्यले बताए।
ड्यामको गेटमा रहेको रबरसिल पुरै बिग्रिएकाले मुनिबाट पानी चुहिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। यसअघिको मर्मतमा पनि रबरसिल नफेरिकाले अहिले फेर्न लागिएको उनको भनाइ छ।
वि.सं. २०३५ पछि मर्मत नगरिएको ड्याम मर्मतका लागि एक करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ। तालको पानी घटाएपछि फेवाताको सुन्दरतामा पनि ह्रास आउनुका साथै डुंगा व्यवसायी प्रभावित भएका छन्। डुंगा चढ्न जानेहरू हिलो हुँदै आउजाउ गरिरहेका छन्। पानी कम भएको मौका पारेर स्थानीयले माछा मारिरहेका छन्।
वि.सं. २०१७ पहिलोपटक बाधिएको फेवातालको बाँध २०१९ मा पूरा भएको थियो। त्यसपछि तालले स्वरुप लिएको फेवातालको बाँध २०३१ मा भत्किएको थियो। बाँध भत्केर तालको पानी घटेको मौका पारेर तालको जग्गा अतिक्रमण गरिएको यसअघिका अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छन्। २०३५ सालमा पुनः बाँध बनेपछि तालले पुरानै रूप लिएको हो।